२ बर्ष भित्रै खुल्ने भयो सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, ३० लाखले पाउने भय रोजगारी! कहाँ-कहा खुल्ने भयो? « Light Nepal
२ बर्ष भित्रै खुल्ने भयो सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, ३० लाखले पाउने भय रोजगारी! कहाँ-कहा खुल्ने भयो?
Published On : 17 March, 2016 3:03 am
काठमाडौं, ३ चैत– सरकारले ३० लाख नागरिकलाई रोजगारी हुने गरी सात प्रदेशमा ७ औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने तयारी गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले १० लाखलाई प्रत्यक्ष र २० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने अभिप्रायले ७ ठाउँँमा औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने तयारी गरेको हो ।
उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन गरी देशको औद्योगिक प्रबद्र्धन गर्न सरकारले ७ प्रदेशको ७ ठाउँँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागेको जानकारी गराए । मन्त्रालयले ती औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नका १ बर्ष भित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र दुई बर्षभित्र उद्योग खोल्ने लक्ष्य लिएको वताए । उनले देशलाई सम्पन्न बनाउन औद्योगिक क्रान्ति आवश्यक रहेकोले सरकारको नीति अनुसार ७ ठाउँँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापन गर्न लागिएको बताए । ‘औद्योगिक प्रबद्र्धनविना देश सम्पन्न हुन सक्दैन । त्यसकारण औद्योगिक क्रान्ति गर्नुपर्दछ’ उनले भने, ‘त्यसका लागि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सरकार लागेको छ ।’
सरकारले २०२० साल यता औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकेको छैन । त्यतिवेला ५ ठाउँँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको थियो । त्यसयता २०४० सालमा ११ ठाउँँमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भने पनि खोल्न सकेको छ्रैन । मन्त्रालयले ती ठाउँँको एक हजार विगाह क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने तयारी गरेको हो । उनका अनुसार ५ ठाउँँमा जग्गा खोज्ने काम पनि सकिएको छ । मन्त्रालयले झापा,मकवानपुर, चितवन, रुपन्देही, बाँके, जुम्ला वा सुर्खेत र महेन्द्रनगरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये प्रदेश नं. २ र ६ का लागि जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ भने अन्यमा जग्गा खोजिसकेको छ ।
मन्त्री पाण्डेले दुई ठाउँमा जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको जानकारी गराए । ‘पाँच ठाउँमा जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको छ’ उनले भने, ‘अव दुई ठाउँमा पनि हामीले जग्गा खोजिरहेका छौं ।’ उनले नापी कार्यालय मालपोत कार्यालय र स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकार जग्गा खोजिएको बताए । उनका अनुसार चितवनको जुटपानी र सुर्खेत वा जुम्लामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा ठूला मझौला र साना उद्योग खोलिने छ ।
मन्त्री पाण्डेले औद्योगिक क्षेत्रमा पहिलो प्रथामिकता स्वदेशमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थका उद्योगलाई हुने बताए । ‘हाम्रो पहिलो प्रथामिकता नेपालमा नै पाइने कच्चा पदार्थक बन्ने उद्योगलाई हुने छ’ मन्त्री पाण्डेले भने, ‘त्यसपछि अन्यलाई दिइने छ ।’ मन्त्रालयले एक औद्योगिक क्षेत्रमा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई पनि उद्योग खोल्न आव्हान गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनका गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयसँग औद्यागिक क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ’ मन्त्री पाण्डेले भने, ‘अर्थमन्त्रालयले अगाडि जानुहोस भनेको छ । त्यही अनुसार हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं ।’
कहाँ कहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुदैछन् ?
प्रदेश नं १ः झापाको दमक नगरपालिकाको वडा नंं १८ र १९ रतुवा र मावा खोलाको दोभानमा ५ सय विगाह
प्रदेश नं २. उपयुक्त जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको छ ।
प्रदेश नं ३ः मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नंं १६ को मयूरधाप र सो वरपरको अरु खाली जग्गा समेतलाई ओगट्नेगरी ३ सय बिगाह ।
प्रदेश नं ४ः उपयुक्त जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको छ ।
प्रदेश नं ५ः रुपन्देही जिल्लाको मोतिपुर गाविस हाल बुटवल उपमहानगरपालिको ८१३ बिगाह र बाँकेको नौवस्ता गाविसको वडा नंं ७ को ५२५ विगाह ।
प्रदेश नं ६ः उपयुक्त जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको छ ।
प्रदेश नं ७ ; कञ्चनपुर जिल्लाको दैजी गाबिस हाल वेदकोट नगरपालिकाको वडा नंं २ र ३ को करिव ९ सय विगाह जग्गा ।